Shir ka dhacay Dekada Boosaaso Sarkiil Puntland iyo Sarakiil ka socotay Midowga Yurub ee la dagalanka burcad badeedka – Walaal24 Newss
Shir ka dhacay Dekada Boosaaso Sarkiil Puntland iyo Sarakiil ka socotay Midowga Yurub ee la dagalanka burcad badeedka
March 25, 2019	0	By walaal24
Saraakiil sare oo ka socota hawgalka Midowga Yurub ee ka hortagga burcad-badeedda xeebaha Soomaaliya ayaa maanta magaalada Boosaaso kula shirsan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland sida ay xaqiijiyeen shirkaasi.
Wefdiga saraakiisha oo ka socda hawlgalka Midowga Yurub ee loo yaqaan the European Union Naval Force ATALANTA (EU NAVFOR) ayaa ka soo degay markab dagaal oo xeebta ku sugan waxaana ay saaka aroortiii soo galeen magaalada Boosaaso iyagoo ay dusha sare ka waardiyeynayaan diyaaradaha sahanka.
Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Puntland iyo saraakiisha Midowga Yurub ayaa haatan shir uga socda garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso inkastoo aan faahfaahin laga hayn qodobada ay ka wada-hadlayaan labada dhinac.
Ahlu-sunna oo sheegtay heshiiskii kala dhaxeeyay Dowlada Federaalka in uu Burburay
Sawiro: Wafdi uu hoggaaminaayo Wasiirka Difaaca Jabuuti oo Muqdisho soo gaaray
Dhageyso: M. ku xigenka Galmudug oo shegay in aysan diyar u aheyn Madaxda Maamul Goboledyada in Dalka ay ka dhacdo Dorasho Xur ah.
Dhageyso+Sawiro: Maxkamada derajada koowaad oo xukun ku riday dhalinyaro lagu soo eedeyay sameynta Qaraxyada
Daawo: Golaha Wasiira SL. oo ansixiyay laba xeer oo kala ah xeerka xaqsiinta iyo holgabka Ciidamada iyo xeerka Ismaamulka Gobolada Dalka
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo Khudbadii uu ka jeediyay Xafladii caleemo saarka Madaxweyne Lafta gareen